"မြန်မာ တို့ အတွက် ဗဟုသုတ" : ၁၄။ Blog နှင့် Google+ တွဲသုံးနည်း ၆ နည်း : Blobber နည်းပညာ (၃)
၁၄။ Blog နှင့် Google+ တွဲသုံးနည်း ၆ နည်း : Blobber နည်းပညာ (၃)
ပထမနည်း (က): +1 button (gadget)
ဒီဆောင်းပါးမှာ သင့်ရဲ့ ဘတော့အတွက် +1 Button ကိုညွှန်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်၊ အကယ်လို့သင်ဟာ သင့်ရဲ့ Post အတွက် +1 Button ကိုရှာနေတာဆိုရင် Share buttons and use the +1 counter. ဒီနေရမှာ သွားပါ။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မဆို သင့်ရဲ့ Blog ကို + လုပ်မယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ သတင်းတွေကို မျှဝေရန် သူတို့အသိုင်းဝိုင်းကို အသိပေး မျှဝေရင်းသင်လဲလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေးသွင်းချက်တွေဟာ သင့်ရဲ့စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကို လွယ်ကူချောမောစွာ အသုံးပြုတာလဲဖြစ်သလို သင်ကလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Blog မှာလဲ +1 Button gadget ပေါင်းယူထားရန် အောက်ပါနည်းလေးကို ကြည့်ပါ။
1. Layout မှာ Click နှိပ်ပါ။
2. သင်အသုံးပြုလိုသော နေရာ Addagadget ကို ကလစ်နှိပ်ပါ၊ နောက်မှပြန်ပြီးနေရာပြေားပေးလို့လဲ ရပါတယ်၊ သင်နေရာပြောင်းလိုပါက မောစ်က ပွိုင့်ကို၍ လိုရာကိုဆွဲယူ၍ရွှေသောနည်းဖြစ်ပြောင်းပေးနိုင်သည်။
3. သင်၏ Blog မှာ + ကိုပေါင်းထဲ့ရန်အောက်မှာမြင်နေရတဲ့ပုံက +1 Button Available for Dynamic Views နားက + ကို Click နှိပ်ပါ။
4. အောက်မှပြထားပေးတဲ့ပုံလေးလို ပေါ်လာတဲ့ Box လေးထဲမှာ အရွယ်စားကို သင့်သလိုပြောင်းပြိး ရင်တော့ Save မှာ ကလစ်နှိပ်ပါ
ပထမနည်း (ခ): Google+ Badge
Google+ Badge ကိုသင့်ရဲ့ Blog မှာဖေါ်ပြလိုပါက သင့်အတွက်လွယ်သွားပါပြီး အထက်ကနည်းအတိုင်း Layout မှာ Click နှိပ်ပါ။
အကယ်၍ သင့် Blog မှာအပြောင်းလဲ ပြုလုပ်ပါက Google+ tab ဟာလဲ အလိုလျှောက်ပြောင်းလဲပေးပါလိပ်မယ်။
သင် Google+ Badge ကို Add မလုပ်ခင်သင်ရဲ့ Blogger Profile ကိုသေချာအောင် Upgrade အရင်လုပ်ပါ၊ သိလိုတာများကို ဤနေရာမှာ upgraded your Blogger profile toaGoogle+ profile. ကြည့်ပါ။ ဤအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရာမှာလဲ အထက်ကနည်းများကဲသို့ ပြုလုပ်ပါ။
2. သင်အသုံးပြုလိုသော နေရာ Addagadget ကို ကလစ်နှိပ်ပါ၊
3. သင်၏ Blog မှာ Google+ Badge ကိုပေါင်းထဲ့ရန်အောက်မှာမြင်နေရတဲ့ပုံက Google+ Badge Available for Dynamic Views နားက + ကို Click နှိပ်ပါ။
ထို့နောက်အောက်ပါကဲ့သို့ Box လေးကြလာပြီး Save မှာ ကလစ်နှိပ်ပေးပါ။
Automatic Manually specify
Dark text on light background Light text on dark background
Save Cancel Back
ပထမနည်း (ဂ) : Google+ Followers
အထက်ပါနည်းနှစ်ခုကိုထဲ့ပြိးတဲ့အပြင်နောက်ထပ် Google+ Followers ကိုပါထဲ့နိုင်ပါသေးတယ်။
Blogger Profile ကို Google+ profile သို့ Upgrade ပြုလုပ်ပြီးပါက သင်ရဲ့စိတ်ဝင်စားရာ ဝင်စားရာ အဖွဲ့တွေကို သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ upgrade your Blogger profile toaGoogle+ profile, သို့သော်လဲ သင်က Google+ မှာ Private ကိုရွေးထားမိခဲ့ပါကသင့်ရဲ့ Blog မှာသူတိုလာပြိး သတင်း မျှဝေတာမျိုးလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး ထိုကြောင့်သင့်ရဲ့ Blog ကိုသင် လူသိရှင်ကြားဖြစ်အောင်လုပ်ထားဘို့လိုပါတယ်။ သင်က သင့်ရဲ့ Blogger မှာ Google+ Followers gadget ကိုထဲ့တဲ့အခါမှာ သင့် Blog ကိုဝင်ဖတ်သူက သင့် Blog ကိုသူတို့ရဲ့ Profiles များမှာ Add လုပ်တာမျိုးကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် အကယ်၍သူတို့ သဘောကျမယ်ဆိုရင်ပေါ့။ ဒါကြောင့်မို့ သင့် Gadget ဟာ Blogger နှင့် Google+ ကြားမှာ အလုပ်လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့လဲ ကြိုက်နှစ်သက်သူမိတ်တွေများဟာ သင့် Blog ကိုသူတို့အချင်းချင်းလဲ တစ်ယာက်ကိုတစ်ယောက်လေ့လာနိုင်ပြိး မိတ်ဆွေဖွဲ့တာမျိုး သတင်းများ မျှဝေတာမျိုးကိုလုပ်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
သတိထားရန်မှာ Gadget ဟာသူမှာရှိနေတဲ့ Google ကမိတ်ဆွေအပေါင်းသင့်းအားလုံးကို တစ်ပြိုင်နက်ထဲမှာ အသုံးပြုနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်ကိုပြုလုပ်လိုပါက ထုံစံအတိုင်း Layout မှာ ကလစ်နှိပ်ပြီး ဝင်ပါ။
Google+ Followers ယူရန်အတွက် Layout ကနေဝင်ပြီး သင်နှစ်သက်ရာနေရာက Addagadget ကိုကလစ်နှိပ်ပေးပါ။
အောက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ ပုံက Google+ Followers က + မှာ ကလစ်နှိပ်ရွေးပေးပါ။ ကျန်တာတွေကတော့ အားလုံး အထက်မှာပြထားတဲ့နည်းတွေနဲ့ အတူတူပါဘဲ။
အစမှာတော့ သင့်ရဲ့ Gadget ထဲမှာ ဘယ်သူမှရှိနေမှာ မဟုတ်သေးပါဘူး သင့် Blog အပေါ်မှာ သင်ဘယ်လောက် လူစိတ်ဝင်စားအောင် လုပ်နိုင် လဲ အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
ဒုတိယ နည်း Posts များကို Google+ သို့မျှဝေနည်း
ဒီလို Post တွေကို Google + မှာမျှဝေကြဘို့အတွက် Blogger ရဲ့စည်းမျည်းများကို သင်အရင်ဖတ်ထားဘို့လိုပါတယ် သို့မဟုတ်ပါက သင်ဒီလို Post များကိုမျှဝေခွင့် ရမှာမဟုတ်ပါဘူး (စာအုပ်ကြီးတိုင်းရေးသားခြင်းမျှသာဖြစ်သည်) Google+ User Content and Conduct Policy.
မှာဝင်ရောက်လေ့လာကြပါကုန်။ Blogger ရဲ့အကြီးမားဆုံးအပြောင်းလည်းကတော့ မိတ်ဆွေများရှာဖွေခြင်းနှင့် သူတို့သတင်းများဖတ်သူများနှင့် ဆက်သွယ်ကြခြင်းများဖြစ်ပါတယ်။ Post တွေကို Google+ ကနေမျှဝေခြင်းဖြင့် သင်ဟာလူဘောင်အဖွဲစည်းသစ်ကို ရရှိနိုင်ပြိး သူတို့အားလုံးက သင်ကိုသိရှိလို ရှာဖွေလိုကြမှာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်အကယ်၍ သင့်ရဲ့ Blog ကို upgrade your blog to connect with Google+ လုပ်ပြီးသွားပါက သင့်ရဲ့ Google+ profile မှာရှိတဲ့သင့်ရဲ့ အမည်စရင်းတွေရေးသွင်းလာကြမှာဖြစ်ပြီး သင်ရဲ့စာပေရဲ့ သတင်းတွေဟာလဲ အကျိုးပြန်လည်သက်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ သင့်ရဲ့ စာရွက်တစ်ရွက်နဲ့ သင့်ရဲ့ သေချာတဲ့ Blogs တွေကို ပေါင်းသင်းဆက်နွယ်ဖို့ရွေးချယ်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့စည်းများကလည်း ဘယ်လို သင့် မျှဝေလိုသော Post ကိုရွေးပြီး Add Custom Message မှလဲ မျှဝေနိုင်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ Blogger နှင့် Google+ ပေါင်းစပ်မှုနှင့်အတူ Google+ profile နှင့် Google+ တွေကို Blogs တွေမှာချိက်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် common name ရဲ့အောက်မျာမိတ်ဆေီများအချင်းချင်း မျှဝေခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Google+ ကိုစတင်ရန်သူ့ အပေါ်မှာကလစ်နှိပ်ပါ။ နောက်တစ်ခုက သင်ရဲ့ ကိုပိုင် Post လေးတွေကို ဆက်တိုက်ရေးပေးနေဖို့လိုပါတယ်။ ပြီးနောက် ပြည်သူတွေဆီကို မျှဝေပေးပါ။
အကယ်၍ သင်ရဲ့ Post ကို Share လုပ်ပြီးသွားလို့ ဒီ Share Box ကိုပြန်မပေါ်စေလိုပါက Setting ကနေသင်ပြောင်းယူနိုင်ပါတယ်။ Blogger ထဲမှာရှိတဲ့ Google+ ကိုသွားပြီး Check နှင့် Unchecking Bottom ကနေလုပ်လို့ရပါတယ်။
Share ကိုအကယ်၍ သင်ကအမြဲ Share လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပါက အောက်ကပုံမှာ ပြထားတဲ့နေရာကနေ Share လုပ်နိုင်ပါတယ်။
တတိယ နည်း Google+ Comments အကြောင်းသိကောင်းစရာ
Google+ Comments ဟာ Blogger ပေါ်ကနေ မှန်ချက်ပေးတဲ့စနစ်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ရေးသားမှုလေးတွေကို Blogger Profile ကနေ Google+ ကိုအမြဲ ဆန်းသစ်နေအောင်လုပ်ဆောင်ပေးနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
Comments တွေက သင့်ရဲ့ Blogger ရဲ့ Post ဖန်တည်းပေးပါတယ်။
Comments တွေက Blog Post ပေါ်မှနေပြီး Google+ ကို Share လုပ်ပေးစေပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Blog Post ကို Google+ မှာ ဆက်သွယ်မျှဝေပေးပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Blog က Comment ကိုဖတ်ဖိုရန် စာဖတ်သူသည်လဲ Google+ ကိုအသုံးပြုဖို့ လိုပါတယ်။
Google+ ကိုစတင်အသုံးပြု၇န်အတွက် သင့်ရဲ့ Blog ထဲက Google+ Comments မှာ ကလစ်နှိပ်ပါ။
ဒီလုပ်ဆောင်မှုအတွက်သင်သတိထားရမှာကတော့ ဒီလိုလုပ်တောင်မှုတွေကိုဖေါ်ပြပေးရန် connect your blog to Google+ကို သင်လေ့လာဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Google+ Comments ၏ အင်္ဂါရပ်များ
Google+ Comments ဟာ Blogger comments နဲ့ထူးမခြားနားလေးပါ သူမှာအရေးကြီးတာလေး ၅ ချက်လောက်ပိုတာဘဲ ရှိပါတယ်။
Blog ပေါ်မှာ Comment ရေးတော့မယ်ဆိုရင် Google+ ကို Share လုပ်ပေးဘို့ Default ကိုစစ်ပေးပါ။
Google+ ရဲ့ Posts တွေဟာ Blog ရဲ့ Post တွေနဲ့ချိပ်ဆက်ပြိး Blog ရဲ့ Post တွေကိုဖေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်း Comment ကို Google+ ကို Share လုပ်မယ်ဆိုရင် Google+ ရဲ့ Vice Server ကနေ Comment တွေကို ပြန်စာရေးပေးနိုင်ပြိး မူရင်း Comment ကိုသာ အများပြည်သူတွေကို ရှယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Blogေ၇းသူက Shared မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုပါက ဒီ Comment ဟာ ရှီနေရမဲ့နေရာမှာ ရှိနမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Post တစ်လုကိုရေးသူအနေနဲ့ Google+ ကနေပြိးတော့ သတိပေးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
A Google+ Comment underablog post
The same comment in Google+
အကယ်၍သင်က သင့်၏ URL ကိုအပြောင်းမလဲ လုပ်မယ်ဆိုလဲ Google+ Comment ဟာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Google+ Comments FAQ မှသိလိုသမျှကိုရှာကြည်ပါ။
စတုတ္ထနည်း သင်လို Blogger များနှင့်တွေ့ဆုံပါ မျှဝေပါ
စတုတ္ထနည်း မှာတော့အောက်ပါ Video လေးကိုကြည့်ပါ
ဒီ Video လေးကြည့်ပြီးရင် ဒီမှာ ကလစ်နှပ်ပြီးဝင်ပါ http://www.google.com/intl/en/+/learnmore/communities/ ဝင်ပြီးလျှင် ပေါ်လာမဲ့ စာမျက်နှာ အသစ်က Browse Communities မှဝင်ရောက်နိုင်ပါတည်။ ထို့နောက်ထပ်မန်ပေါ်လာမဲ့စာမျက်နှာမှာ သင်စိတ်ဝင်စားသောအုပ်စုကိုရွေးချယ်ဝင်နောက်နိင်ပါသည်။
အောက်ပါ Video လေးကိုကြည့်ပါ
ဒီ Hangouts ကိုသုံးဘို့ အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Gmail ထဲမှာ Hangouts ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ အီးမေးပို့ဆောက်ပြောနေတာ ကိုရပ်ပြိး သင်မိတ်ဆွေတွေကို တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သင့် Gmail ထဲက အောက်ပါပုံလေးနေရာ မှာ ကလစ်နှိပ်ပြီး သင့်ရဲ့ Gmail ကို Upgrade လုပ်ပေးလိုက်ပါက သင် စတင်အသုံးပြု နိုင်ပါပြီ။
သင်နှင့် သင်၏မိတ်ဆွေတို့ Hangouts ကို Apple devices မှာ Google ကိုအသုံးပြုပြီး ဆက်သွယ်နိုင်ကြပါပြီ။ iPhone, iPad and iPod touch. တို့အတွက် Download the app, ယူနိုင်ပါတယ်။
Live-stream ပွဲတွေကိုလဲ Hangouts ကနေပြီး ကြည့်နိုင်နေပါပြိ။
Google+ နေပြိးသင့်ရဲ့ Post များကိုပြည်သူများကိုရှင်းပြပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Post ကိုရေးသားသူကတော့ Software Engineer +Malte Ubl ဖြစ်ပါတယ်။ သူပြောတာကတော့ Blogger ကနေ Google+ mentions ကိုသုံးပြီးစကားဝိုင်းတစ်ခုအဖြစ်စကားပြောဆိုရင်ဒါဟာ အကောင်းဆုံးနည်းဆစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လူတွေရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုဆွဲယူရန်အကောင်း နည်းသစ်တစ်ခုကို ပေးတယ်လို့လဲ ဆိုပါတယ်။ အကယ်၍သင်က Blogger ကနေ ပို့စ် တစ်ခုကို Google+ ကို share your post တင်တော့မယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ Hangouts ကပို၍လွယ်ကူအောင်လုပ်ပြေးပြီး သင့်ရဲ့ပြောချင်သမျှကို အများပြည်သူတွေရဲ့ ShareBox ဆိကိုအရောက်ပို့ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို သင်ပြောချင်တာ ပြောဖိုရန် သင့်ရဲ့ Blogger Post Editor သင်ပြောချင်သောသူ၏ အမည်ရှေ့တွင် + ကိုထဲ့ရိုက်ပေးပါ
သင့်ရဲ့ Publishes Post မှာ Link တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ သင့်ရဲ့ Page သို့မဟုတ် Profile ကိုဖေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ‘Add to circles’ button နားမှာ Card တစ်ခုကိုပြထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Link အပေါ်မှာ ကလစ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ Google+Profile ဆီကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
+Gregory Fair ကိုကျေးဇူးတင်သင့်ပြီး မသိတာကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ connect your blog to Google+ ဒီနေရာကနေ သင်ဝင်ပြီး သင့် Blog မှာလဲဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါနည်း ၆ နည်း၏ မူရင်းများ
Add Google+ buttons and gadgets
Help readers follow and share your posts on Google+ with the +1 button, Google+ badge, and Google+ Followers gadget. Visit the Layout tab, click "Addagadget," and select the Google+ gadgets you'd like to add.
Turn on Google+ Comments to bring comments on your posts together in one place, including posts about your content in Google+.
Share your posts withanew audience
Share your blog posts publicly on Google+, and encourage your readers to re-share. Add hashtags when you share to tie your posts to relevant themes and trending topics, increasing their visibility.
Connect with readers face-to-face
Hostagroup video chat conversation with your readers inaGoogle+ Hangout. You can livestream it and post the final video right on your blog.
Participate in Google+ Communities related to your blog. You can meet people interested in similar subjects and discover new topics to cover.
Spark conversations with Google+ mentions
Add Google+ mentions to your posts to get someone's attention. Your mention will link to their Google+ page or profile, and you can notify them when you share.